Sidee CBD u horumarin kartaa noloshaada galmada • Dawooyinka Inc.eu
Sahan dhowaan lagu sameeyay in kabadan dad ka badan 1.000 waxay ogaadeen in kuwa CBD ogaaday horumarka weyn ee noloshooda galmada.
1 Maad moodeysaa?
2 CBD iyo baqdinta galmada ee guuldarada
3 Dhiigaaga isku buufi
4 CBD iyo caadada
5 Kordhin tamarta iyo feejignaanta loo baahan yahay in la qabto
6 U qaado qolka jiifka CBD
In kasta oo daraasadda 'Remedy Review' ay ogaatay in kaqeybgalayaashu waligood isticmaalin saliida CBD, 68% kuwa sameeyay, ayaa sheegay in cannabidiol waxay saameyn wanaagsan ku yeesheen noloshooda galmada. Qaar kale waxay yiraahdeen waxay hagaajisay niyadooda guud waxayna ka caawisay inay is dejiyaan.
Marka sidee u shaqeysaa? Adeegsiga CBD si loo wanaajiyo noloshaada galmada kaliya kuma eka inay la xiriirto badeecadaha sida gaarka ah loogu talagalay in lagu isticmaalo xilliga galmada (tusaale ahaan saliida CBD). Dhibcahaaga maalinlaha ah ee saliidda CBD ee carrabkaaga hoostiisa ku jirta ayaa faa'iido u leh noloshaada galmada siyaabo aadan weligaa ka fiirsan.
In kasta oo aad u maleyn karto in xubintaada galmada ee ugu muhiimsan ay ku yaalliin lugahaaga dhexdooda, dhab ahaantii waxay ku taalaa saxda dhegaha dhexdooda. Maskaxda bini aadamka ayaa xudun u ah dhammaan dareenkaaga galmada waxayna door weyn ka ciyaartaa sida ay u shaqeyso (ama naafo) shaqadeena galmada. Wadada galmada waxaa xukumaa hypothalamus, waa qeyb ka mid ah maskaxda bini aadamka oo waliba xakameysa gaajada, harraad iyo hurdo (runti dhamaantiina aasaaskaaga aasaasiga ah).
CBD waxay kaa caawin kartaa sidii loo heli lahaa niyadda hami galmo (ilaha)
Laakiin halkee laga hadlayaa CBD? Daraasadaha ayaa muujinaya in CBD ay horumarin karto socodka dhiigga maskaxda, taas oo iyaduna hagaajinaysa waxqabadkaaga garashada iyo guud ahaan shaqada maskaxda, oo ay ku jirto niyaddaada. Waa wax aan micno lahayn in la joogo xaaladdu waa qeyb weyn oo ka mid ah galitaanka qancisa. Galmada ugufiican waxay dhacdaa markaad dareento sexy, iyo kalsooni iyo niyaad farxadeed waa qeyb weyn oo tan ka mid ah.
CBD iyo baqdinta galmada ee guuldarada
Daraasaduhu waxay muujinayaan in walwalka uu saameyn weyn ku yeelan karo sida ugu fiican ee firfircoonidaada galmada u shaqeyso. Cadaadiska iyo walwalka waxay sababi karaan dhibaatooyin xagga cillad la'aanta galmada ah, taasoo kaa dhigeysa mid aad u walwal badan, oo kugu haysa meertada socota ee ah inaad aad u walwasho oo aadan waligaa ka bixin - taas oo kaliya keenta walwal badan. Dad badan ayaa sidoo kale la kulma daqiiqado xilli walwal ah, gaar ahaan xagga galmada lamaanaha cusub.
Welwelku sidoo kale wuxuu sababi karaa dhibaatooyin daran oo xagga cillad la'aanta galmada ah, sida xubinta taranka haweenka, xaalad sababi karta adkeynta qasabka muruqyada xubinta taranka - taasoo ka dhigeysa galmo galmo galmo xanuun badan sida ugu fiican, aan macquul aheyn ugu xun. In kasta oo xubinta taranka haweenka ay sababi karaan arrimo jireed sida UTIs (infekshinka kaadi mareenka), dhalmada, iyo caadada, haddana waxaa sidoo kale kicin kara waxyaalo shucuur kiciya sida cabsi galmo ama waxyeello galmo hore.
In kasta oo daraasadaha ku saabsan waxqabadka galmada iyo CBD ay wali ka maqan yihiin, cilmi baaris lagu sameeyay CBD iyo walwal ayaa muujinaya in cannabidiol ay gacan ka geysan karto hagaajinta waxqabadka walaaca iyo jahwareerka guud. Taas macnaheedu waa in CBD ay kaa caawin karto yaraynta kiisaska qatarta leh ee cabsida guuldarada (sida xasilinta dareemayaashaada taariikhda ugu horeysa), iyo sidoo kale dhibaatooyinka muddada dheer ee cadaadiska oo si xun u saameyn kara waxqabadkaaga galmada.
Dhiigaaga isku buufi
Daraasad lagu daabacay joornaalka joornaalka ee joornaalka ayaa muujisay in CBD ay faa iido ku leedahay nidaamka wadnaha, taas oo nidaamisa socodka dhiigga ee jirka. Daraasaddan caafimaad waxay muujisay in CBD ay saameyn toos ah ku yeelatay yareynta xiisadda xididdada, taasoo dhalisay dhiig karka hooseeya iyo hagaajinta socodka dhiigga ee jirka.
Inta badan sida jirkeenu u shaqeynayo waqtiga galmada waxaa sabab u ah qulqulka dhiiga oo kordha xubnaha galmada, taasoo sababa unugyada kacsan ee guska iyo kintirka inay bararaan oo aad u xasaasi u ahaadaan taabashada (hab wanaagsan, farxad, dabcan).
CBD iyo caadada
Thanks to saameynta wanaagsan ee CBD ku yeelato dhiig karka iyo wareegga dhiigga, waxay si gaar ah waxtar ugu yeelan kartaa dadka da'da ah ee badanaa la kulma dhibaatooyinka la xiriira galmada. Ceebta weyn ee ku saabsan dadka da'da ah iyo galmada waxay la macno tahay in dad badani aysan ogeyn sida soo noqnoqda ee dhibaatooyinka caafimaad ee ay dadka waayeelka ah ula kulmaan waxay sidoo kale saameyn xun ku yeelan karaan qancitaankooda galmada.
CBD waxay kaa caawin kartaa ka hortagga isbeddelada hormoonnada iyo dhiig karka (ilaha)
Isbeddellada hoormoonka muddada menopause waxay u horseedi karaan hoos u dhaca socodka dhiigga siilka, wuxuu keenaa qallal xubinta taranka iyo yaraanta farxadda galmada, waxay kaloo horseedi kartaa galmada xanuun badan. Dadka qaba dhiig karka (waa cabasho guud oo ka dhex jirta dadka waayeelka ah), tani waxay sidoo kale saameyn xun ku yeelan kartaa noloshooda galmada, sababtoo ah dhiig karka wuxuu keenaa xaddidaadda socodka dhiigga ee xubnaha galmada, taas oo keenta dhibaatooyin ay ka mid yihiin unugyada taranka.
Kordhin tamarta iyo feejignaanta loo baahan yahay in la qabto
Galmadu galmadu waxay u baahan tahay xoogaa tamar ah oo CBD ayaa ku biirin kara tan.
Daraasadaha qaarkood waxay soo jeedinayaan in CBD sidoo kale noqon karto wax kiciya firfircoon, taas oo aan faa iido kaliya u ahayn in la ilaaliyo qofka feejignaanta inta uu qabanayo, laakiin sidoo kale kaa caawin kara inuu heerarka tamartaagu sarreeyo.
U qaado qolka jiifka CBD
Marka lagu daro dhibcahaaga maalinlaha ah ee saliidda CBD, mahadsanidiin kororka maqaarka ee ugu dambeeyay ee CBD, hadda waxaa jira tiro badan oo badeecooyin ah oo suuqa yaalla oo loogu talagalay in lagu daro qaar ka mid ah sixir cannabinoid dheeraad ah qolkaaga jiifka.
Isticmaal saa'id ah, tusaale ahaan, waxaad isku dayi kartaa inaad isticmaasho saliid duugis ah CBD oo aad la wadaagto lammaanahaaga dareen xasaasi ah, nashaadaad dabacsan ka dib maalin dheer, oo adag. Masaajiintu waxay noqon kartaa mid ka mid ah qaababka ugu fudud uguna waxtarka badan ee dib loogu soo celiyo xoogaa sixir ah oo u keento argagax cusub oo dareen ah xiriirkaaga haddii aad ku dhegan tahay gowsaha.
CBD waxay ku siin kartaa xiisad dheeri ah iyo raaxaysiga qolka jiifka (ilaha)
Haddii aad rabto inaad xiriirkaaga kala soo baxdid CBD heer aad u sareeya, maxaad u tijaabin weyday saliidaha CBD? Saliiddu waa mid ka mid ah ciyaartooyda aadka loogu murugoodo qolka jiifka, iyo saliidaha saxda ah runtii waxay leedahay awood ay ugu rogaan madadaalo, iyagoo ku wareegaya inta u dhexeysa go'yaasha ilaa ay ka noqoto xaflad jaceyl dabacsan.
Ilaha waxaa ka mid ah CandidMagazine (EN), Dhaxal (EN)
Marka laga hadlayo xashiishka, THC iyo CBD waa labada walxo ee ugu badan ee laga wada hadlay. Saliida CBD waa ...
Vicente Jaramillo ayaa qoray:
21 Juun 2020 ee 02: 31
El Acite de CBD, sirve para actos galmada Anal